Iipompo zepompo ye-OEM ye-Peristaltic - China i-OEM ye-Peristaltic Pump abavelisi, abaxhasi
Intshayelelo Impompo ye-Peristaltic evela kwi-stepper motor engama-57 kunye nesibiyeli esinyukayo esenziwe ngobukhulu obuncinci, isakhiwo esilula seemveliso zempompo ye-peristaltic. Ngokukodwa kwizixhobo, izixhobo, ukuxhasa ukusetyenziswa kweentlobo ezahlukeneyo zempompo zinokusetyenziselwa ukufezekisa ukuhanjiswa okungamanzi okulandelayo kwe-1140mL / min. Ngu umsebenzisi ngqo drive stepper iimoto ukulawula inkqubo yomsebenzi, usebenzisa umgangatho, panel ufakelo ehambelanayo. Item Paramenters Item Paramenters Isantya seemoto （DGpump yena ...
Intshayelelo Impompo ye-Peristaltic yimpompo encinci ye-WX10-14 yentloko ene-42 yeemoto ezihamba ngesayizi encinci, isakhiwo esilula seemveliso zempompo yeperistaltic. Ngokukodwa kwizixhobo, izixhobo ezixhasa ukusetyenziswa kwe-24mL / min ukufezekisa ukuhanjiswa kolwelo olulandelayo. Ngqo eqhutywa motor stepper motor ukulawula inkqubo yomsebenzi, ukusetyenziswa komgangatho okanye ufakelo panel, kwaye ungenziwa ngemfuneko ngokweemfuno zomsebenzisi ufakelo lenjongo imveliso. Ipharamitha